केपाले रोके २ पेनाल्टी !! संसनिपूर्ण जितसंगै चेल्सी र आर्सनल यूरोपा लिगको फाइनलमा - Experience Best News from Nepal
जारी यूरोपा लिग सेमी फाइनल अन्तर्गत आज दुई ठुला भिडन्त भएका थिए । फाइनलको यात्राका निम्ति आज चेल्सीले फ्रान्कफर्ट र आर्सनलले भ्यालेन्सियाको सामना गरेको थियो । चेल्सी र फ्रान्कफर्टको खेल चेल्सीको घरेलु मैदान स्टामफर्ड व्रिजमा भएको थियो भने आर्सनल र भ्यालेसियाको खेल भ्यालेन्सियाको घरेलु मैदानमा भएको थियो ।
चेल्सी विरुद्ध फ्रान्कफर्ट
जर्मन क्लब फ्रान्कफर्टको घरेलु मैदानमा चेल्सीले ड्र खेलेको थियो भने सेमी फाइनलको दोश्रो लेगमा चेल्सीले पहिलो हाफको २८ औ मिनेटमा नै अग्रता लिएको थियो । चेल्सीका लोफ्टस चिकले २८ औ मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए । १ अवे गोलको फाइदामा रहेको चेल्सी पूर्ण रुपमा अग्रताको अवसरमा देखियो ।
दोश्रो हाफमा फ्रान्कफर्टका जोबिचले ४९ औ मिनेटमा गोल गर्दै समीकरण गोलमा २-२ हुन पुग्यो र अन्तत खेल अतिरक्त समय तर्फ लम्कियो । तर अतिरक्त समयमा समेत कुनै गोल हुन सकेन र अन्तत खेल पेनाल्टी सुट आउट तर्फ लम्कियो ।
चेल्सीका कप्तानले पेनाल्टी मिस्स गरेता पनि चेल्सीका किपरले २ पेनाल्टी बचाउ गर्दै चेल्सीलाई फाइनल प्रवेश गरायो ।
भ्यालेन्सिया विरुद्ध आर्सनल
इन्ग्लिश क्लब आर्सनलले स्पेन क्लब भ्यालेन्सियाको सामना गर्दा पहिलो लेग आर्सनलले पूर्ण खेल आफ्नो बसमा पारेको थियो भने आजको सेमी फाइनल दोश्रो लेगमा समेत भ्यालेन्सियालाई दबावमा राख्यो । आजको खेलमा भ्यालेन्सियाले पहिलो ११ औ मिनेटमा गामिरोको मद्दतमा अग्रता लिएको थियो भने पुन आर्सनलका औबिमेयांगले १७ औ मिनेटमा गोल फर्काउदै पहिलो हाफ १-१ मा ल्याएका थिए ।
दोश्रो हाफमा पुन गमिरोले एक गोल भ्यालेन्सियाका लागि थपे तर आर्सनलका लाकजेट र औबिमेयांगले ५०,६९ र ८८ औ मिनेटमा गोल गर्दै समीकरण गोलमा आर्सनलले ७ र भ्यालेन्सियाले ३ गर्दै आर्सनल यूरोपा लिगको फाइनल प्रवेश गर्यो । आजको खेलमा औबिमियांगले उत्कृस्ट ४ गोल गर्दै आर्सनललाई फराकिलो जित दिलाए ।
चेल्सी र आर्सनल फाइनल खेल मे २९ माइ हुनेछ ।
रुदै विदा भए आर्सनलबाट आरोन राम्से, ९ बर्ष पछि आर्सनलबाट विदा अर्को सिजन युभेन्ट्सबाट खेल्ने
आर्सनल, सिटी र युनाइटेड देखि अन्य ३ टिमको भिडन्त आज !! जानुहोस् कुन खेल कुन समयमा हुदै